Colaadda Suuriya: Duqeyn culus xilli ay soo kordhayso rajada xabbad joojinta - BBC News Somali
Image caption Weerarka Idlib waxaa ku dhaawacmay tobannaan qof
Duqeyn culus oo dhanka cirka ah oo lagu qaaday deegaanada ay ganacta ku hayaan fallaagada ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen in ka badan 100 qof saacada un kaddib markii Mareykanka iyo Ruushka ay ku dhawaaqeen qorshahooda xabbad joojinta.
Ugu yaraan 58 qof ayaa ku dhintay tobannaan kalena way ku dhaawacmeen weerar ay diyaarado ku qaadeen magaalada Idlib ee ay mucaaradka Suuriya gacanta ku hayaan.
Magaalada Xalabna, 45 qof ayey wararku sheegayaan inay ku dhinteen weerar lagu qaaday xaafado ay dad rayid ah degan yihiin.
Idlib oo ay carruur iyo haween ku dhinteen
Wararka ka imanaya magaalada Idlib ee ku taalla woqooyiga galbeed ee dalka Suuriya, ayaa sheegaya in dadka dhintay ay dumar iyo caruuri ku jireen.
In kasta oo ay kooxaha gurmadka ee magaalada ku sugani sheegeen in diyaaradaha suuqa weyn ee magaalda Idlib duqeeyay ahaayeen kuwo Ruushku leeyahay, waxa xarunta la socodka xad-gudubyada xuquuqal insaanka ee Syria ee mucaaradka taabacsani sheegtay in ay adag tahay in si dhab ah loo xaqiijiyo dalka laga leeyahay diyaaradahaas.
Xaruntu waxay intaa ku dartay in dadka dhintay ay ku jireen 13 carruur ah iyo 13 kaloo dumar ahi.
Raami Cabdiraxmaan oo ah agaasimaha xarunta ayaa sheegay in dadku xilligii weerarku ku habsaday ay suuqa wax ka iibsanayeen si ay ugu diyaar galoobaan ciidda taasina ay sababtay in tiradaa badan ee dad ahi ku le'daan goobta.
Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysay laba ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdegga ah, ayaa sheegtay in ay weli socdaan hawlaha maydadka lagaga soo saarayo burburka hoostiisa.
Todobaaddadii la soo dhaafay waxay diyaaraduhu duqaynayeen magaalooyin iyo tuulooyin ay mucaaradku fadhiyaan oo badankoodu gacanta ugu jira kooxda Jaysh Al-Fatx oo ay ku bahoobeen ururo badan oo Islaamiyiin hubaysan ahi.
Xalabna xaaladdu ma fiicna
Dhanka kalena waxaa sii kululaaday dagaalka dhulka ah ee ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo dableyda mucaaradka ah mgaalada Xalab.
Warar laga helayo xukuumadda Suuriya ayaa iyaguna sheegaya in ciidamada dowladdu ku sii siqayaan magaalda Caamiriya iyadoo diyaaradaha dagaalka ee dowladuna duqaynayaan goobaha ay mucaaradku ka taliyaan.
Weeraradani waxay dhaceen maalin un kaddib markii Mareykanka iyo Ruushku shaaciyeen inay isla meel dhigeen heshiis ay doonayaan in lagu soo afjaro colaadda ka socota Suuriya oo ay ka mid tahay xabbad joojin la filayo inay dhaqan gasho maalinta Isniinta ah.